अर्थमन्त्री खतिवडाले आज साँझ सम्म राजिनामा दिने ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/अर्थमन्त्री खतिवडाले आज साँझ सम्म राजिनामा दिने !
काठमाडौँ – अर्थमन्त्री तथा सरकारका वर्तमान प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले राजिनामा दिने भएका छन्। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेसँगै डा. युवराज खतिवडाले आजै राजिनामा दिने भएका हुन्।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले आज साँझसम्म राजिनामा दिने बारे जानकारी गराएका छन्। बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार खतिवडाले बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा साँझसम्ममा आफूले राजीनामा दिने तयारी गरेको जानकारी गराएका हुन्।
सरकारका तर्फबाट गरिएको सिफारिशका आधारमा राष्ट्रियसभा सदस्य राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । यसअघि अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई समेत सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकी थिइन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले तीन सदस्य नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
यसअघि सिफारिशसहित नियुक्त भएका राष्ट्रियसभा सदस्यमा डा खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल छन् । तीमध्ये डा खतिवडाको दुईवर्षे कार्यकाल गत फागुनमा नै सकिएको थियो । त्यसपश्चात ओलीको सिफारिसमा ६ महिनाको लागि खतिवडा पुनः मन्त्री बनाइएका थिए। संवैधानिक प्रावधानका अनुसार अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल भदौ २० गतेबाट समाप्त हुँदै छ ।
एयरपोर्ट: महामारीबीच यसरी ठडियो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल